वर्तमान, एक एकदम साधारण रोग polycystic ovaries जस्ता मा। यो रोग को कारण, दुर्भाग्यवश, पूर्ण ज्ञात छैन। तर, यो बावजुद, यो जो अमेरिका को एक नम्बर पहिचान polycystic ovary सिंड्रोम अक्सर हुन्छ। यो समूह जोखिम जस्तै hypothalamus, pituitary, adrenal, थाइरोइड रूपमा अशक्तताको अंगहरु र ovaries सिधै आफूलाई साथ महिला समावेश गर्नुहोस्।
यसलाई जो ovulation को कमी द्वारा विशेषता हर्मोन pathologies सम्बन्धित सबै रोगहरु लागि कारण परिभाषित कि polycystic ovaries माथिको देखि निम्नानुसार। Polycystic ovaries बाँझोपन गर्न नेतृत्व परिणामस्वरूप।
यो रोग को निदान कुरा, यहाँ डाक्टर धेरै विधिहरू गर्न resorted छन्। कहिलेकाहीं परिस्थिति जब यथार्थ निदान, उदाहरणका लागि, केवल एक अल्ट्रासाउंड परीक्षा असम्भव छन्। यस्तो अवस्थामा, थप जीव रसायन र हर्मोन रगत परीक्षण नियुक्त। कहिलेकाहीं तपाईं गर्न Resort छ endometrial बायोप्सी।
Polycystic ovaries, जो को कारण, हामी देख्यौं, हर्मोन स्तर मा शामिल छ, menstrual अनियमितताहरु, शारीरिक कपाल को अत्यधिक वृद्धि सँगसँगै, को ovaries को आकार मा, मोटोपना रूपमा साथै बढ्छ। अन्तिम दुई लक्षण हरेक महिला मा उत्पन्न छैन।
को polycystic ovary सम्झना छैन, तपाईंले नियमित मासिक ध्यान पर्छ र लामो ढिलाइ को मामला मा तुरुन्तै चिकित्सा ध्यान खोज्न। कहिलेकाहीं महिला भुँडी मा एक तान्ने दुखाइ अनुभव। यो लक्षण पनि सजग गराएका गर्नुपर्छ।
त्यहाँ केवल विवाह पछि हुनुपर्दछ स्त्रीरोग विशेषज्ञ लागू गर्ने एक misperception छ। तर रोग जवान बालिका सीधै सम्बन्धित छ। एकदम गाह्रो गराउँछ जो polycystic ovaries, स्थापित गर्न भन्ने तथ्यलाई, त्यहाँ यौवन अवस्था छ। र यो विकृति विकास को शुरुवात छुटेका छ भने, थप उपचार कम फलदायी हुन सक्छ।
रोग जस्तै एक युवा उमेर मा सुरु किन: एक व्यावहारिक प्रश्न छ? अक्सर, यो प्रारम्भिक आघात र बारम्बार तनावपूर्ण अवस्था द्वारा बढुवा गरिएको छ। यो अनौठो लाग्न सक्छ, तर रोग को विकास गर्न पुस तीव्र श्वसन भाइरल संक्रमण, साथै pharyngeal गलसुए को पुरानो सुनिंनु हुन सक्छ। विकृति आकस्मिक जलवायु परिवर्तन र गरिब पर्यावरण अवस्था प्रकुपित गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै कारक, संयोजन, र व्यक्तिगत भएको स्नायु प्रणाली, बारी मा, "ठीक निरीक्षण" गर्न ovaries काम सुरु जो, को इनकार गर्न नेतृत्व।
के परिणाम polycystic ovaries हुन सक्छ? केही बालिका र महिला uterine रक्तस्राव मार्क। रोग एक लामो समय को लागि अनुपचारित बाँकी छ भने, विकास को एक जोखिम छ endometrial क्यान्सर। र, यो सबै को एक परिणाम, को sterility रूपमा।
polycystic ovaries को उपचार को लागि, यो दुई विधिहरू द्वारा बाहिर छ। मुख्यतया रूढिवादी रोग दमन विधि हर्मोन स्तर पत्र कम गर्छ जो विचार। उपचार मा एक महत्वपूर्ण चरण ovulation प्रोत्साहित गर्न छ।
त्यस अवस्थामा, यदि रूढिवादी उपचार सकारात्मक परिणाम दिएको छैन, तिनीहरूले शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप गर्न laparoscopy द्वारा Resort। को पेट गुहा जसद्वारा को बैग तरल पदार्थ, सानो ट्युमर र अतिरिक्त अंश वृद्धि संग साफ छन् laparoscope लेजर, प्रयोग गरी प्रविष्ट छ। यस कार्यका किनभने यसको पूर्ण संरक्षित प्रजनन समारोह को एक परिणाम रूपमा राम्रो छ।
कहिलेकाहीं तपाईं Resort छ सर्जरी खोल्नुहोस्। तथापि, उपचार को यो विधि अक्सर प्रयोग गरिन्छ उन्नत अवस्थामा।
अब तपाईंको आफ्नै निष्कर्ष आकर्षित। कुनै अनावश्यक समस्या जोगिन गर्न, यो राम्ररी आफ्नो स्वास्थ्य र तत्काल चिकित्सा ध्यान खोज्न एक विशेष विकृति पहिलो सङ्केत मा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण छ।
को कलाई मा दुखाइ
कसरी प्राकृतिक हालतमा छोराछोरीको खोकी व्यवहार गर्न
गैर-Hodgkin गरेको लिंफोमा के हो?
Pancreatitis: यो रोग, कारण, लक्षण, उपचार के हो
बिरुवाहरु को जीवन प्रकारका
खोज "लुक्दै": पीडब्लू मा पागल बाँदर कल गर्न कसरी?
कावासाकी ZZR 400 - को मोटरसाइकल र ग्राहक समीक्षा विशेषताहरु
प्रयोगशाला र औद्योगिक मात्रा मा अमोनिया को तयारी
"तपाईंले आफ्नो रोग प्रेम गर्नेछु" (डा Sinelnikov): पुस्तक र तरिका